May 2013 ~ IT Guide Myanmar
ကျနော်ဒီနေ့ AIO tool လေးတခု ထပ်တင်ပေးအုံးမယ်နော်...
ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာကို လေ့လာယူကြပါ....အထဲမှာလဲ PDF ဖိုင်တွေပါ ပါတယ်...
အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်-အနာသိမှ ဆေးရှိမယ် ဆိုတဲ့ စကားပုံတွေအတိုင်းပဲ
ဘယ်လိုထိုးဖောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသိမှ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာ သိမယ်လေ...
ဖိုင်ဆိုဒ် 82.2 MB ရှိပါတယ်..
mediafire ကနေတင်ထားပေးပါတယ်.... mediafire အကြောင်းသိကြတဲ့အတိုင်း
လိုချင်သူများကတော့ ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီးယူလိုက်ကြပါ။(သတိ- ဖြည်းဖြည်း နှိပ်ပါ-ပွိုင်တာအရှိန်ပြင်းလွန်းရင် မော်နီတာကြီး ပေါက်ထွက်သွားမှာစိုးလို့ပါ...ဟဲ..ဟဲ)
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန
Myanmar Information Management Unit(MIMU)
BuddhaNet Dhamma Download
မြန်မာ – အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်အွန်လိုင်း
Mozilla Firefox ထက်မြန်တဲ့ Maxthon ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်။
ကွန်ပြူတာတွင် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဘာသာပြန်ရန်အတွက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်။
ကွန်ပြူတာမှာ အလှဆင်ဖို့နာရီလေးတွေပါ Alarmပါပေးလို့ ရပါတယ်။
ကွန်ပြူတာမှာရှိထားသင့်တဲ့ Fanalmedia Player 2011
Burmese Classic စာအုပ်စင်။
ဝိညာဉ်သစ် မြန်မာအွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်။
မြန်မာ အီးဘုတ် ဖရီးဒေါင်းလော့။
မြန်မာ့ ဆေးမြီးတိုများ လေ့လာရန်။
အင်္ဂလိပ် စကားပြော သင်ချင်ရင်။
မိမိ ကွန်ပြူတာတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးတွေ ဒေါင်းလေ့ယူရန်။
Mozilla Firefox ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်။
Quick Time Player ဒေါင်းလေ့လုပ်ရန်။
Adobe Reader ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်။
WINAMP PLAYWE ဒေါင်းလေ့လုပ်ရန်။
Adobe Flash Player ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်။
Adobe Reder ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်။
Foxit Reader ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်။
PDF Printer ဒေါင်းလောလုပ်ရန်။
Media Player Classic ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်။
Google Earth ဖြင့်တကမ္ဘာလုံးကို မြေပုံပေါ်မှာကြည့်ရန်။
VZO chat ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်။
ooVoo ဒေါင်းလော့ လုပ်ရန်။
ဘဝ ဒဏ္ဍာရီ မှပြန်လည်ဖော်ပြထားပါသည်
Service by Art မှ ကူးယူဖော်ပြပေးပါသည်
9:13 AM6comments
ကဲဗျာ...ခဏခဏ မေးးလာကြတယ် ငွေရှာနည်းးတဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်မ၀င်စားလို့ လုပ်လည်းမလုပ်ကြည့်မိပါဘူး ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေစေရန် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းပါ။
အမျိုးကောင်းသားကနေ ယူပြီးမျှဝေလိုက်ပါတယ်... လိုအပ်ချက်များရှိပါက................
သည်နေရာမှာဘဲ သွားပြီးကွန်မက်ပေး မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်..နော်
Window 8 ကို သုံးရတာ ရှုပ်နေသူများအတွက် Window7စတိုင်ပြောင်းနည်း
6:23:00 am အောင်အောင်(မကစ) No comments
Window 8 သုံးနေပြီး စတိုင်ကို ပြောင်းချင်ရင် ဒီဆော့ဝဲလေး ထည့်ထားသုံးလိုက်ပါ
သုံးနေကျမဟုတ်လို့အသားမကျသူများ Start Menu စတိုင်ကို အဆင်မပြေသူများ
Window ပြောင်းစရာမလိုပဲ ဒီဇိုင်းလေးနဲနဲပြင်၍ Window7ပုံစံလေး ပြောင်းလိုက်
ဆော့ဝဲထည့်ပီးရင် ဆော့ဝဲကိုဖွင့်ပါ ပြီးရင် ပုံမှာပြထားသလို စတိုင်ကို ယူ OK ပေးပါ
တခြား အများကြီးကလိရပါတယ် ကိုယ်တိုင်ထည့်ပီး သေချာ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ
Download - ClassicShellSetup_XP -7- Vista ).exe
မူရင်းလင့် - http://sourceforge.net/projects/classicshell/?source=dlp
မူရင်း - http://www.aungsanmks.blogspot.com/2013/05/window-8-window-7.html
အသုံးပြုနည်းကတော့ စိတ်တော့မရှိကြပါနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကို ရှာယူကြပါ....
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ သိပ်မကြီးလှပါဘူး(နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များအတွက်)...551.082 MB ပဲရှိပါတယ်...ဆွဲနိုင်တဲ့သူဆွဲလိုက်ကြပါ..ဖိုင်မခွဲထားပေးပါ..တစ်ဖိုင်ထဲအပြီးပါပဲ...
လိုချင်သူများ ဒီပို့စ်အောက်ဆုံးမှာ ပေးထားတဲ့ ဒေါင်းလို(ဒ်)လင့် ကိုသွားလိုက်ကြပါ...
Download လုပ်နည်း -
4shared မှာ Download လုပ်ရင် အကောင့် တစ်ခုရှိရပါတယ်
အဲတော့ အားလုံးအဆင်ပြေရအောင် ကျနော်ဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်ကို အများအတွက်ရည်ဇူးပြီး ရက်ရောစွာနဲ့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...ကျေးဇူးပြု၍ password ကိုပြောင်းလဲခြင်းမလုပ်ကြပါနဲ့
မိမိ၏ Facebook Chatting History ကို အပြီးအပိုင်ဖျက်ပြစ်နည်း
ဒီနေ့တော့ မိမိ၏ Facebook Chatting History ကို အပြီးအပိုင်ဖျက်ပြစ်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ESBI စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လေးဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းမင်း(SE)မေးထားခဲ့ဘူးတာလေးကို ခုမှပြန်ဖြေပေးရင်း အခြားသော FB ရောဂါသည်များထဲက မသိသေးသူများအတွက် ဒီပို့စ်လေးကို တင်ပေးလိုက်ရခြင်းပါ ။
တချို့ကျတော့ message သမိုင်းကို အမှတ်တရသိမ်းထားချင်ကြတယ် ။ တချို့ကျတော့လည်း များတယ်ရှုပ်တယ် လေးတယ် ဆိုပြီးဖျက်ပစ်လိုက်ချင်ကြတယ်...
ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် Facebook Chatting History ကို အပြီးအပိုင်ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်..
1. မိမိ FB အကောင့်ကို Login ဝင်လိုက်ပါ ။ ပြီးရင် Option စက်သွားရုပ် သင်္ကေတလေးကိုနှိပ်ပါ ။
ပြီးနောက် See Full Conversation ဆိုတဲ့ စာတန်းကိုနှိပ်ပါ ။
2.အောက်ပုံ အတိုင်း မြင်ရမှာပါ ..Actions နောက် အနီရောင်ဝိုင်းပြထားတဲ့ Down Arrow လေးကို နှိပ်ပါ ။
3. အောက်ကပုံအတိုင်း Delete Message ဆိုတဲ့စာတန်းကိုနှိပ်ပါ ။
4. နှစ်ဘက်စလုံးကပို့ထားခဲ့တဲ့ message စာပိုဒ်လေးတွေအရှေ့မှာ လေးဒေါင့် Check Box လေးတွေ
တွေ့ရမှာပါ ။ မိမိဖျက်လိုတဲ့ စာပိုဒ်တွေကို ရွေးပြီး(သို့မဟုတ်) အားလုံးကို Check လုပ်ပြီး အောက်ဒေါင့်နားက အနီရောင် လေးဒေါင့်ကွင်းကွင်းထားတဲ့ Delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
5. အောက်ကပုံအတိုင်းမြင်ရပြီး Delete Message ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။
ဒါဆိုရင် မိမိ၏ Facebook Chatting History တွေအပြီးအပိုင်ပျက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ ။
ကဲ ... ဘယ့်နှယ်လဲ ... လွယ်တယ်မဟုတ်လား?
ဒါလောက်ဆို လူတိုင်းလုပ်တတ်ကြပြီလို့ထင်ပါတယ် ။
ညီငယ် ညီမငယ်များအားလုံး နည်းပညာတွေ ဒီထက်မကတိုးပွားကြပြီး အများအကျိုးဆောင်နိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေ ။
မရှင်းလင်းတာများရှိခဲ့ရင် konainga2@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည် ။
ုဖုန်း Free call ၊ Message Free ပို့လို့ရတဲ့Viber ဆော့ဝဲဟာကွန်ပျူတာတွေအတွက်လည်းထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ Viber ကိုကွန်ပျူတာမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် အကောင့်ဖွင့်နည်းကတော့ဖုန်းမှာလိုပါဘဲ ။ကွန်ပျူတာမှာ အသုံးပြုရနိုင်ဖို့အတွက် Viber မှာ အရင် အကောင့်လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပတ်တစ်ခုဘဲလိုပါတယ် ။ Viber for Windows XP/7/8 ကိုအသုံးပြုမယ်ဆို အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
Viber for Windows XP/7/8 အားရယူရန်
Viber for Mac OS X အားရယူရန်
Install လုပ်နည်းကတော့Download လုပ်ထားတာကို ဖွင့်လိုက်ရင် အောက်ကပုံအတိုင်းမြင်ရပါမယ်
ဖုန်းနံပတ်ထည့်ပေးရပါမယ် Viber မှာ အရင် အကောင့်လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပတ်လေး အသုံးပြုရပါမယ်
ကုတ်ခဏစောင့်ပါ မလာသေးရင် အစကနေပြန်လုပ်ပါ
ကုတ်ကို ဖုန်းက Viber ထဲကို မက်ဆေ့ပို့ပေးပါမယ်
ဖုန်းထဲက Viber ကိုလည်း အင်တာနက်သုံးပြီးတော့ ဖွင့်ထားဖို့လိုပါတယ်
မူရင်း - မြန်မာမိုဘိုင်အေပီပီစတိုး
Facebook Online Chatting Status ကို Hide လုပ်ထားချင်တဲ့ သူများအတွက် လုပ်ဆောင်နည်း
Facebook Online Chatting Status ကို Hide လုပ်ထားချင်တဲ့ သူများအတွက်(သို့မဟုတ်)
မိမိအွန်လိုင်းတက်နေတာကို ကိုယ့် Group ထဲကလူတွေမသိစေချင်ရင် ၊ ဒါမှမဟုတ် မိမိ Chatting လုပ်ချင်တဲ့သူ တစ်ယောက် (သို့) တစ်ယောက်ထက်ပိုပြီး On ထားချင်လို့ ရတဲ့နည်းလေးကိုသိချင်ပါတယ်
ကူညီပေးပါလို့ မေးထားတဲ့ ညီလေးမောင်မောင်ဦး ၊ မင်းမင်းတင် ၊ gtalk နဲ့ ဖုန်းမှတစ်ဆင့် မေးထားသူများနှင့် တစ်ချို့ မသိကြသေးသော FB ရောဂါရှင်များအတွက်
ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဒီအကြောင်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ပို့စ် တစ်ခုအရင်က Santhus ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကမေးထားဘူးလို့ တင်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ် ဒီနေရာလေးမှာ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
အဲ လေပန်းတာ နဲနဲများသွားပြီ ။ ကျနော်တို့ စလိုက်ကြရအောင်ပါ...
ခုရှင်းပြမယ့် နည်းလေးက ပိုပြီး လွယ်ပါတယ်....
1. Login ဝင်လိုက်ပါ ။ မိမိ FB စာမျက်နှာရဲ့ ညာဘက်အောက်ဒေါင့်နားလောက်က စက်သွားပုံစံ
သင်ကေတနဲ့ Option ဆိုတဲ့ အနီရောင်ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာကို နှိပ်လိုက်ပါ ။
2. Tun off Chat ဆိုတဲ့စာတန်းကလေးကို နှိပ်လိုက်ယုံနဲ့ မိမိအွန်လိုင်းတက်နေပေမယ့်လည်း
Group ထဲကသူငယ်ချင်းများက မိမိရဲ့ online status အစိမ်းရောင်မီးလေးကိုမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး
အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ မိမိက Chatting လုပ်လိုသူ တစ်ယောက် သို့မဟုတ် တစ်ယောက်ထက်ပိုပြီး
On ထားတဲ့နည်းလေးပါ ။ အောက်မှာဆက်ကြည့်လိုက်ပါ ။
1. အောက်က ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Advanced Setting ဆိုတဲ့ စာတန်းကိုနှိပ်ပါ ။
3. ရွေးစရာအချက် (၃) ခုထဲက ဒုတိယ အချက်ဖြစ်တဲ့ Turn on chat for only some friend...
ဆိုတဲ့အချက်ကို ရွေးပေးပြီး Key word တစ်ခုခုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ မိမိ် Friend Group ထဲက ကိုယ်ရိုက်ထည့်သည့် စာလုံးနှင့်ပါတ်သက်သော အမည် List စာရင်း အောက်ကပုံမှာလိုကျလာမှာပါ
မိမိ အလိုရှိရာရွေးပြီး နှိပ်လိုက်ယုံပါပဲ ။
ဒါဆိုရင် အောက်ကပုံအတိုင်းမြင်ကြရမှာ ...ပြီးရင်တော့ Save ကိုနှိပ်ပြီးသိမ်းလိုက်ရင် ပြီးပါပြီ ။
Save ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံလိုမျိုး မြင်ရမှာပါ ဒီမှာ တော့ ကျနော် ၂ ယောက်ပဲ On ထားပြီး ကျန်တဲ့လူတွေကို OFF လုပ်ထားတဲ့ပုံပါ ။
စိတ်ဝင်စားဖွယ် website လိပ်စာများ
4. www.tizag.com ( ၀က်ဆိုဒ်ရေးသားချင်သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မယ့် ဆိုဒ် )
5. www.webteacher.com ( ၀က်ဆိုဒ်အခြေခံဗဟုသုတတွေ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဆိုဒ်စာမျက်နှာတစ်ခုပြုလုပ်ပုံတွေ ရှင်းပြထားတဲ့ ၀က်ဆိုဒ် )
6. www.elo-godsign.com ( လိုဂို အကောင်းဆုံး လင့် 300 ကျော်ကို စုစည်းပေးထားတဲ့ ဆိုဒ် )
7. www.photobucket.com ( ဗီဒီယိုတွေကို တင်နိုင် ၊ ကြည့်နိုင်တဲ့ ဆိုဒ် )
8. www.say-it.com ( seal အမှတ်အသားတစ်ခုကို အွန်လိုင်းတွင် ချက်ချင်းဖန်တီးနိုင်ပြီး တံဆိပ်တုံးတစ်ခုလုပ်နိုင်တဲ့ ဆိုဒ် )
9. www.mebo.com ( Yahoo သုံးသူရော ၊ G-Talk သုံးသူရော ၊ MSN သုံးသူရော တစ်နေရာတည်းမှာ စကားပြောနိုင်တဲ့ ဆိုဒ် )
10. www.bok.google.com ( ရှေးဟောင်း မြန်မာ စာအုပ်များကို အခမဲ့ ဒေါင်းလော့ဒ်လုပ်နိုင်တဲ့ ဆိုဒ် )
11. www.futuremessage.com / www. emailfuture.com ( မေးလ်တစ်ခုက်ို နောက်လေးငါးနှစ် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အချိန်ကျမှ ပို့နိုင်တဲ့ ဆိုဒ် )
12. www.speakingfaces.com ( သင့်မျက်နှာကို တင်ပို့လိုက်လျှင် အရှက်ကြီးသူလား ၊ သဘောထားကြီးသူလား ၊ စမတ်ကျသူလား ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသူလား ပြောပြမယ့် ဆိုဒ် )
13. www.whoreadme.com ( မေးလ်တစ်စောင်ကို ဒီဆိုဒ်မှပို့လျှင် လက်ခံရရှိသူ ဖတ်မဖတ် ၊ ပို့ပြီး ဘယ်အချိန်မှဖတ် သလဲဆိုတာသိနိုင်တဲ့ ဆိုဒ် )
14. www.festisite.com ( ကမ္ဘာ့ငွေကြေးစက္ကူတွေပေါ်မှာ သင့်မျက်နှာကို ထည့်သွင်းကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ ပျော်စရာဆိုဒ် )
15. www,searchengine.com ( အကောင်းဆုံးနှင့် အခမဲ့သုံးနိုင်သော ဆိုဒ်များကို ဖော်ပြပေးသည့်ဆိုဒ် )
16. www.answerbag.com ( မေးချင်ရာမေး တစ်မိနစ်အတွင်းပြန်ဖြေပေးမယ့် ဆိုဒ် )
17. www.langid.net ( မသိတဲ့စာကြောင်းကိုမှတ်ပြီး ဂျပန်စာလား .၊ ကိုရီးယားစာလား ၊ တရုတ်စာလား ဖြေဆိုပေးတဲ့ဆိုဒ် )
18. www.scopesys.com ( သင်သိချင်တဲ့နေ့စွဲကိုရိုက်ထည့်ပြီး အဲဒီနေ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေနဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေဖော်ပြပေးတဲ့ ဆိုဒ် )
19. www.beautifulpeople.com ( ရုပ်ချောသူများကိုသာ ပေးကြည့်တဲ့ ဆိုဒ် )
လုပ်ပုံ လုပ်နည်းကို Blog နံပါတ် 92 မှာ ရေးထားပါတယ်..။လေ့လာကြည့်ပါ…။